'राणाकालमा जति पनि मानवीय संवेदना देखिएन'
टिप्पणी विहीबार, मंसिर १६, २०७३
सत्याग्रही मार्ने बाटोमा अग्रसर सरकार र दलहरुले ‘कलर रिभोलुसन’लाई निम्तो दिँदैछन् ।
२००७ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेरले अनशनकारी विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाप्रति मानवीय संवेदनशीलता देखाएका थिए ।
तर, वीपी कोइरालाको नाउँमा राजनीति गर्ने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको एमाले सम्मिलित सरकारका बेला छोराका हत्यारालाई कानून बमोजिम कार्वाहीकोे माग राख्ने नन्दप्रसाद अधिकारी अनशन गर्दागर्दै मरे ।
माओवादी नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस सम्मिलित वर्तमान सरकारले डा गोविन्द केसीको अनशनप्रति मानवीय संवेदनहिनता देखाइरहेको छ ।
एउटा सत्याग्रही अनशनमा रहेका बेला ज्यान गुमाउनु भनेको सामान्य घटना हुँदै होइन । तर, हामीकहाँ राजनीतिक दलहरु जनसरोकारका सवालमा गम्भीर र जिम्मेवार हुँदै भएनन्, नागरिक समाज राजनीतिक दलहरुको विस्तृति मात्रै भइदिए । स्वतन्त्र बुद्धिजिवीहरु थोरै र असंगठित छन् ।
यस्तै बेला ‘कलर रिभोलुसन’ शुरु हुन सक्छ । तर, त्यसको परिणिति पूर्वानुमान गर्न सकिंदैन । इजिप्ट, ट्युनिशिया, लिबिया जस्ता देशहरुमा राजनीतिक शक्ति असफल हुँदा ‘कलर रिभोलुसन’ भए । त्यसको शुरुवातको संकेत अहिले नेपालमा पनि देखिंदैछ । त्यसबेला स्थिति कसैको नियन्त्रणमा रहने छैन ।
सय जना युवा माइतिघर मण्डलामा केही नबोली ‘म पागल’ लेखेको पट्टी टाउकोमा बाँधेर बसिरहेका हुन्छन् । यो त्यसकै संकेत हो । राज्यले बुझ्नुपर्छ सडकमा टायर बाल्ने दुईचार हजारभन्दा शान्तिपूर्ण रुपमा प्रतिवद्ध भएर उभिनेहरुमा नैतिक शक्ति धेरै गुणा बढी हुन्छ ।
डा. केसीले कुनै असामान्य माग गरेका छैनन् । उनले भागवण्डाबाट शासन सञ्चालन नगर, राज्यका दायित्वहरु योग्य, प्रतिभाशाली र चोखा मानिसहरुलाई देऊ भन्ने जस्ता सामन्य माग मात्र अगाडि सारेका छन् ।
राज्यले स्वयम् पालन गर्नुपर्ने यस्तो अनुशासन सम्झाउन पनि डा केसीले अनशन गर्नुपर्ने, अनशनमा सरकारले गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगर्ने, बारम्बार अनशन र अनशनकारीप्रति घोर उपेक्षा गर्ने अवस्थाले प्राजातिन्त्रक नेपालमा निरंकुश राणाशासनको जत्ति पनि मानवीय संवेदनशीलता नरहेको सावित हुन्छ ।
मानवीय सम्बेदनशीलताको खडेरी परेको यो बेलामा के ‘कलर रिभुलोसन’ अवश्यम्भावी भैसकेको हो ?
सरकार लगायत प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई मेरो आग्रह छ कि डा केसीको माग चाँडो पूरा गर्नुहोस् । निरंकाुश राणा शासकले देखाएजत्ति मानवीय संवेदनशीलता देखाउनबाट नचुक्नुहोस् ।
नन्दप्रसादको जस्तै गति डा केसीको भयो भने इतिहासले तपाईँहरुलाई क्षमा गर्ने छैन ।
कलर रिभोलुसनजस्तै कुनै क्रान्ति शुरु भयो भने त्यसले कसैलाई फाइदा पु्‍र्‍याउँदैन । मुलुकलाई दुर्घटनामा जानबाट बचाऔं ।